Baarlamaanka Soomaliya Ayaa Gaashaanka Ku Dhuftay In Muddo Kordhin Loo Sameeyo Xukuumada Xassan Sheekh
Baarlamaanka Soomaliya Ayaa Gaashaanka Ku Dhuftay In Muddo Kordhin Loo Sameeyo Xukuumada Xassan Sheekh	Sunday, 01 May 2016	Soomaaliya
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaashaanka ku dhuftay in muddo laba bilood ah lagu kordhiyo xilliga ay dhacayso doorashada sannadkan 2016-ka la filayo inay dalka ka dhacdo, kaddib markii uu codsi arrintaas ku saabsan uu u gudbiyay RW Somalia Cumar C/rashiid.
Shama’arke ayaa sheegay inuu kala hadlay arrintan guddoonka baarlamanka Somalia, isagoo xusay in tani ay imaan karto haddii cillado dhanka farsamadaha ay yimaadaan, inta hawsha doorashada lagu jiro. “Waxaa rajeyneynaa inaan doorashada ku qabanno xilligii loogu talo-galay, laakiin haddii ay dhacdo iyadoo la shaqeynayo ay dhinaca farsamada wax ka suuro-geli waayaan waqti ayaa loo baahan doonaa, aniga iyo guddoonka baalamaanka ayaa wadahadalnay arrintan,” ayuu yiri Sharma’arke. Codsiga raisal wasaaraha ayaa ku qotomay in doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka bisha September ee sannadkan dib loo dhigo illaa bisha December ee isla sanadkan, taasoo baarlamaanku uu diiday.
Heshiiskii doorasho ee Muqdihso lagu saxiixay ayaa dhigayay in laga qabto dalka doorasho bisha September ee sanadkan, iyadoo codsiga baarlamaanku diiday uu noqnayo kii ugu horreeyay oo xukuumaddu ay la timaaddo.	More in this category:
« Alshabaab Oo La Wareegtay Ruuni-Good Tiro Ciidanka Xooga Dalka Soomaliyeedna Gacanta Ku Dhigay Iyaga Oo Nool	Alshabaab Oo Gawracay Askar Ay Ku Qabteen Dagaalkii Runirgood Iyo Baadigoobka Anbadkii Oo Wali Socda »
Qaraxii Daalo Ka Dib Oo Si Wayn Loo Badalay Hanaanka Baadhitaanka Dadka Dhoofaya Oo 3 Hay'addod Fuliyaan (Sawirro)
Alshabaab Oo La Wareegtay Ruuni-Good Tiro Ciidanka Xooga Dalka Soomaliyeedna Gacanta Ku Dhigay Iyaga Oo Nool
Admiral Faarax Axmed Cumar: Caalamku Ma Rabaan In Aan Dhisanno Ciidankeena Ee Xaalufinta Badeena Ayay Rabaan
Beeralayda Labbada Shabeele Oo Dayactir Ku Samaynaaya Biyo Xidhka Sabuun Ee Wabiga Shabeele (Sawirro)
Madaxweynaha Soomaliya Oo Shacabka Ka Tacsiyeeyey Dhalinyardii Ku Dhintay Badda U Dhaxaysa Giriiga Iyo Masar